प्रतिस्पर्धी बन्दै दशैँ : हुनेखानेलाई रमझम, नहुनेलाई ऋणको भार « Lokpath
प्रतिस्पर्धी बन्दै दशैँ : हुनेखानेलाई रमझम, नहुनेलाई ऋणको भार
दशैँ हो कि, यो मेरो दशा….
प्रेम बस्नेतको शब्द रहेको यो गीत हरेक दशैँमा दोहोरिने गीत हो । दशैँ भन्नासाथ धेरैको मानसपटलमा यो गीत आइहाल्छ । गीतमा बस्नेतले भनेजस्तै हुनेखानेलाई दशैँ दशैँजस्तो भएर आउँछ भने भने हुँदाखानेलाई दशैँ आफैँमा बोझ र ऋणको पोको बनेर आउने गरेको छ ।
आफन्तजन भेटघाट गर्ने, रमाइलो गर्ने र भावनात्मक सम्बन्ध प्रबल बनाइराख्ने पर्वका रुपमा दशैँ मनाइँदै आइएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । यही कुरा नै दशैँको सबैभन्दा बलियो र महत्वपूूर्ण पक्ष हो ।
तर पछिल्लो समय देखासिकी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले दशैँ मनाउन थालिएपछि धेरैको लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ दशैँ । यसले समाजको विपन्न वर्गमा ठूलो आर्थिक समस्या निम्त्याउने गरेको छ ।
आर्थिक रुपमा सम्पन्न परिवारहरूलाई जति खर्च गरे पनि रमाइलो लाग्ने दशैँ विपन्न परिवारहरूलाई भने समाजमा देखाउनकै लागि भए पनि चर्को ब्याजमा ऋण काढ्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा धेरैलाई यो एउटा आर्थिक भार बोकाउने दशाको रुपमा देखिँदै आएको छ ।
दशैँमा महँगो लुगा र गरगहना खरिद गर्ने, दक्षिणामा खर्च गर्ने र मासु तथा मदिराको प्रयोग गर्ने र देखासिकी गर्ने संस्कार बढेकाले यसले समाजमा आर्थिक समस्या बढाएको संस्कृतिविद्हरू बताउँछन् ।
दशैँमा आफ्नो हैसियतभन्दा माथि गएर खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुनै शास्त्र वा ग्रन्थमा लेखिएको छैन । खसी काटे दशैँ नकाटे खल्लो भन्ने कुनै धर्मग्रन्थमा उल्लेख छैन । धर्मग्रन्थ, आस्था र विश्वासमा दशैँ मनाउने हो भने देवीका पाउ पशुको रगतको आहालले धुनु जरुरी छैन् । निधारमा जमरा र रातो टीका मात्र लगाएर पनि दशैँको भरपुर आनन्द लिन सकिन्छ ।
दशैँ हिन्दुहरूको समानता झल्काउने पर्व हो । दशैँप्रति धनी र गरिबको सामाजिक र सांस्कृतिक उचाइ एउटै हुन्छ । सबैको आर्थिक अवस्था एउटै हुँदैन । त्यसैले अरुले दशैँलाई भव्य तरिकामा मनाए भन्दैमा ऋण लिएरै भए पनि भड्किलो तरिकामा मनाउनु राम्रो होइन ।
देखासिकीका कारण पनि कम आयस्रोत भएका परिवारलाई निकै गाह्रो हुनेगरेको छ ।
झन् अहिले कोरोना महामारीका कारण सबै व्यापार व्यवसाय ठप्पतुल्य छन् । घर चल्न ठीक्क मात्रै हुने रोजगारी गुमाएका छन् । साँच्चै उनीहरूलाई दशैँ बोझको रुपमा लाग्नु स्वभाविक हो ।
धत्त पापी म त छुट्टै बसौँला’
माथि उल्लिखित पङ्क्तिको अर्थ बुझ्ने हो भने हाम्रो पाँच औँलाले दशैँको अवस्थालाई विश्लेषण गरेका छन् ।
कान्छो औँलामा दशैँको उत्साह छ । उसले भन्छ– दशैँ आयो ।
काइँलो औैँला पनि प्रफुल्लित भएर भन्छ– खाऊँला, पिऊँला ।
गरिबीको चरम अभावमा डुबेको साइलो औँला भन्छ– कहाँबाट ल्याऊँला ?
माइलो औँलाले ‘चोरी ल्याऊँला’ भनी चोर प्रवृत्ति देखाउँछ भने बुढी औँलाले ‘धत्त पापी म त एक्लै बसूँला’ भनी दशैँमा न चोर्ने न देखासिकी गर्ने, बरु आफ्नो हैसियतमा कसैसँग प्रतिस्पर्धा नगरी एक्लै मनाउने अभिव्यक्त गरेको छ ।
बुढी औँलाजस्तै प्रकाशस्ता धेरै परिवारले आफ्नो हैसियतमा कसैसँग प्रतिस्पर्धा नगरी आफ्नो परिवारसँग हाँसीखुसी मनाउन जरुरी देखिन्छ ।
हाम्रो पर्व सबैले मनाउनु पर्छ । प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि यसलाई आपसी सद्भाव र सहचार्यको रुपमा विकास गर्दै जाऔँ ।
सबैलाई दशैँको शुभकामना ।
प्रकाशित मिति: २०७८,आश्विन,२८,बिहीवार १३:०३
दशैँमा देखिएको केही फरक र मनोरम दृश्यहरु
काठमाडौं । देशभर दशैँमा आफ्ना मान्यजनको हातबाट टीका तथा ग्रहण गर्ने कार्य जारी रहेको छ । करिब १० लाख बढी
आजबाट सरकारी कार्यालय खुले, सेवाग्राहीको चाप कम
काठमाडौं । नेपालीहरुको महान पर्व वडा दशैको बिदा सकिएसँगै आजबाट सरकारी कार्यालयहरु खुलेका छन् । असोज २६ गते फूलपातिका दिनदेखि
धनुषामा घाँटी काटिएको अवस्थामा शव फेला, कुकुरसहितको टोली अनुसन्धानमा
काठमाडौं । धनुषामा घाँटी काटिएको अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला परेको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित
ह्वाट्सएपमार्फत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय : प्रहरीमा परे ५० भन्दा बढी उजुरी
काठमाडौं । पछिल्लो समय ह्वाट्सएपमार्फत ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय देखिएको छ । केही समययता विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ह्वाट्सएपमार्फत फोन गर्दै तपाईँलाई यति
टी-ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट आजबाट सुरु, पहिलो खेलमा ओमान र पपुवा…
काठमाडौं भित्रिन थाले सर्वसाधारण, नागढुंगामा चेकिङमा कडाइ
घरायसी विषयमा झगडा हुँदा एक जनाको मृत्यु, अभियुक्त पक्राउ
साथीको घर जान्छु भनेर हिँडेका चौधरी मृत भेटिए
४४ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गर्ने १७ वर्षीय किशोर पक्राउ
फेसबुकमामा कमेन्ट गरेकै कारण पेस्तोल ताक्ने नवनित पक्राउ
बडादशैँको अवसरमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर